I-Flax iyisitshalo esiwusizo kakhulu esinezakhiwo eziyingqayizivele. Kuvame ukusetshenziselwa izinhloso zezokwelapha. Amantombazane amaningi asebenzisa imbewu ye-flax yokunciphisa umzimba nokuhlanza umzimba. Kulesi sihloko sizokutshela ngezinto ezisebenzayo ze-flax nesicelo sayo.
Izinzuzo zeMilambo Ye-Flax
Lezi zinhlamvu ziqukethe izinto eziningi eziwusizo. Imbewu ye-Flax iqukethe ama-fibre, ama-protein yemifino, amavithamini A, E, B, ama-macro kanye nama-microelements, kanye namafutha angenakutholakala e-polyunsaturated. Ngenxa yokubunjwa okunjalo, lesi sitshalo sinomthelela omuhle emsebenzini wonke wenyama. Ngokusebenzisa imbewu ye-flax njalo, kungenzeka ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezifo ezifana nesifo sikashukela, izifo zenhliziyo, izifo zomzimba, izifo ze-neuralgic kanye nokucindezeleka, izifo ezingokwemvelo, izifo zegciwane le-thyroid kanye nabanye abaningi.
Kubonakala ukuthi i-flax iyanciphisa izinga le-cholesterol egazini futhi livame ukucindezela. Futhi kwandisa ingculazi futhi kusiza ukuqeda izimpawu zobuhlungu.
Imifino yefilakisi iqukethe izinto eziwusizo ezifana nama-lignans. Lezi zinto zinezindawo zokulwa nokuvuvukala, ngakho zisusa ubuthi nezifo zomzimba kusuka emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, ziyi-antioxidants ezinhle kakhulu futhi zivimbela kakhulu umphumela wama-radicals eziyingozi emzimbeni. Ngakho-ke, ukusetshenziselwa kakhudlwana kwalo mkhiqizo kusiza ukwandisa intsha.
Esikhathini samasipuni esisodwa sembewu ye-flax noma amafutha ashukela, kuphela isimiso samalanga onke samavithamini amaningi kanye nezakhi, kodwa futhi i-alpha-linolenic acid, evuselela ukwenziwa kwamafutha e-omega-3 ama-acids.
Izakhiwo zeMilima Elingcolisayo YaseLlanad
Amantombazane amaningi asebenzisa i-flax ukuze alahlekelwe isisindo. Ukuxilongwa, kufaka ufulawa, kuthatha kakhulu ukuthanda futhi ngokuthobeka amafutha umzimba wethu nokudla kwethu okuletha. Khona-ke la mafutha asuswa emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, ifilakisi ihlanza ngokuphelele amathumbu. Ukuze wenze lokhu, kuyadingeka ngosuku olulodwa ukuba udle i-tbsp eyodwa ye-flax imbewu yomhlabathi bese uyiphuza ngamanzi amaningi noma nge-kefir.
Odokotela kanye nezondlo zokuncoma batusa kanye nengxenye yonyaka ukuhlanza ngokugcwele umzimba wakho ngosizo lwembewu ye-flax. Ngalokhu, ilineni kumele isetshenziswe ngokulandela uhlelo olulandelayo: isonto lokuqala nsuku zonke, udle isipuni sesipuni esineziphuzo ezixutshwe ne-yogurt. Iviki elilandelayo, udinga ukudla amathisipuni amabili emhlabathini, ukuwageza ngekomishi ye yogurt noma i-yogurt evamile ngaphandle kwezithasiselo. Ngesonto lesithathu, udinga ukusebenzisa i-trichny spoon imbewu ye-flax bese uyiphuza indebe yemikhiqizo yobisi obulili.
Uma ufuna ukugcina inombolo yakho evamile, ngezikhathi ezithile faka imbewu ye-flax ekudleni kwakho. I-Flax inganezelwa kunoma yisiphi isidlo: ufulawa, abilisiwe, othosiwe, ophekiwe. I-Flax ihambisana kahle ne-porridge, inyama, amasaladi, isobho.
Ukusetshenziswa kwefeksi yokwelashwa kwezifo ezihlukahlukene
Njengoba sekushiwo ngenhla, imbewu ye-flax isetshenziselwa ukwelapha izifo ezihlukahlukene. Nazi izindlela zokupheka ezimbalwa:
With ulcer peptic, colitis, noma gastritis
Uma umuntu ehlushwa lezi zifo, kutuswa ukusebenzisa isitshalo se-flax imbewu. Thatha isipuni sembewu, uwafake ku-coffee grinders, uthele izibuko ezimbili zamanzi. Lokhu ukumnika kufanele kume amahora amabili, ngemva kwalokho kuzobe sekulungele ukusetshenziswa. Thatha ngaphambi kokudla ngakunye. I-mucus eyenza, ivula isisu futhi ivimbele ukubukeka kwezimpawu ezingathandeki.
Ngokuvuvukala kwe-rectum nama-hemorrhoids
Ngalesi sifo kunconywa ukuba wenze inhlawulo. Ukwenza isisombululo se-enema, thatha isipuni sembewu ye-flax, ugaye, uthele ingilazi yamanzi abilayo uphinde ufune amahora amaningana. Emva kwalokhu, umcibisholo obangelwayo ungasetshenziswa. Ngemuva kwe-enema, umbuso wokuphumula kombhede kufanele ugcinwe.
Ukuze ulungiselele i-laxative, thatha indwangu yetafula ye-flax imbewu eqoshiwe, ugcwalise ngezibuko ezimbili zamanzi ashisayo bese uwamboza imizuzu eyishumi nanhlanu. Ngemuva kwalokhu, hlela ukumnika futhi uthathe isigamu sendebe esiswini esingenalutho ekuseni. Kukhona enye iresiphi yokulungiselela: thatha amathisipuni amabili endiza ye-flax, engeza kubo ingilazi yamanzi bese ubilisa konke ngokushisa okuphansi imizuzu emihlanu. Khona-ke, thinta ukumnika futhi uthathe kathathu kuya kwesine ngosuku ngomunye wezipuni.
Uma uhlushwa ukukhukhumeza, ikhambi elinjalo lizokusiza ukuqeda le nkinga. Thatha amathisipuni amane ezinhlamvu zefekisi bese uzigcwalisa ngetitha lamanzi. Beka umlilo kancane futhi ubilise imizuzu eyishumi nanhlanu. Ngemuva kwalokho, faka i-pan endaweni efudumele futhi ubeke izindlela zokwenza ihora nesigamu. Lesi sidakamizwa kufanele sithathwe izikhathi ezingu-6-7 ngosuku ngesigamu seglasi. Umphumela uzobonakala emasontweni ambalwa. Ukuze ukunambitheka ukunambitheka ungakwazi ukwengeza ijusi encane lemon.
Ukuqeda lezi zifo, lungiselela indlela ye-taco. Thatha amathisipuni amabili ezinhlamvu ze-flax, engeza kuzo izindebe ezilodwa nengxenye bese uphawula imizuzu eyishumi. Bese upholisa ukumnika, ukuzamazama nokucindezela. Thatha lesi sidakamizwa izikhathi ezinhlanu ngosuku, isipuni esisodwa.
I-isipuni eyodwa sembewu kufanele igcwaliswe nengxenye yeglasi yamanzi ashisayo. Bese ubeka umkhiqizo kancane kancane bese upheka imizuzu eyishumi nanhlanu. Yahlulela ingxube elandelayo, yifake futhi uyisebenzise i-enema.
Uzodinga: ama-gramu angu 40 wezinhlamvu ze-flax, imbewu engama-30 amagremu okuhlwanyela, 30 amagremu we-birch. Hlanganisa zonke izithako bese uthela ingilazi yamanzi abilayo. Bese ugcine ukumnika emanzini okugezela ngamaminithi ayishumi nanhlanu. Lapho ukumnika ukulungele, kupholile futhi kuwufake. Thola futhi ubilise umkhiqizo futhi. Emva kwalokhu, umkhiqizo uzobe usulungele ukusetshenziswa. Thatha izikhathi eziningana ngelanga lesithathu lesilazi.
Uma ungakwazi ukuqeda ukukhwehlela, zama le mithi. Izipuni ezintathu zezitshalo ze-flax zithelela ingilazi yamanzi abilayo, zishaya yonke into imizuzu eyishumi, bese ususa amanzi. Esikhathini samanzi ahlanzekile engeza amathisipuni ayisithupha nengxenye ye-anise, amathisipuni amahlanu wezimpande ze-licorice nama-400 amagremu enju. Hlanganisa zonke izithako kahle bese upheka phezu kokushisa okuphansi imizuzu emihlanu. Ngemuva kwalokhu, nciphisa ingxube bese uthatha izikhathi ezine ngosuku ngaphambi kokudla ngesigamu sendebe.
Thatha amathisipuni amathathu embewu bese uwagcwalisa ngetitha lamanzi. Beka umlilo kancane futhi ubambe imizuzu engamashumi amabili. Ngemuva kwalokhu, uthele ukumnika kwe-ukumnika futhi ushiye ukusetha amahora amabili. Thatha le remedy njalo ngamahora amabili ngesigamu seglasi ngesimo esishisayo. Umphumela uzobonakala emva kwamasonto amathathu.
Thela ilitha elilodwa lamanzi ashisayo 20 amagremu wezinhlamvu ze-flax. Nastavitainen amahora amahlanu. Ngemuva kwalokhu, hlala bese uthatha isigamu sendebe ngaphambi kokuba udle noma uhlakulele isisu somzimba.
Thela isipuni sembewu ye-flax nge-ingilazi yamanzi abilayo bese uthola isigamu sehora. Ngemva kwalokhu, thatha ukumnika izikhathi ezingu-3 ngosuku ngezinkezo ezilodwa.
Njengoba ubona, imbewu ye-flax iyasiza kakhulu kuwo wonke umzimba. Isetshenziselwa ukuvimbela izifo eziningi, ukwelashwa, kanye nokuhlanza umzimba. Emashalofini ezitolo ungawutholi kuphela imbewu ye-flax, kodwa futhi u-linseed amafutha, kanye nofulawa wefekisi. Le mikhiqizo nayo iyasiza. Angasetshenziselwa ngisho nezinhloso zezimonyo.
Izindlela zomphakathi zokuphakamisa i-hemoglobin
Isikhumba esihlanzekile ngaphandle kwe-acne
Ukuqhekeka ezinsikeni ngesikhathi sokuncelisa
Umehluko yobudala emibhangqwaneni
Ukuvuvukala kwesisu - i-cystitis
Ikhadi lokubingelela lonyaka omusha ngesitayela se-scrapbooking: kanjani ukwenza ikhadi ngezandla zakho
Ukupheka komphakathi ukuba kube mncane futhi kumnandi
Indlela yokuphumula eSpain wedwa
Amakhekhe epephu ane-caramel ne-tshokoledi
Ungakugwema kanjani ukungqubuzana nabangani
Ama-apula aqoshiwe anobisi
U-Anna Semenovich uzokuzama ukuzibamba iqhaza elisha
Izinqubo zokucwaninga zesikhumba ezinoshintsho ezihlobene nobudala